Odayaasha dhaqanka Muqdisho oo khiyaano QARAN ku kacay iyo Ururka Waddaniga Soomaaliyeed oo cambaareeyey |
Odayaasha dhaqanka Muqdisho oo khiyaano QARAN ku kacay iyo Ururka Waddaniga Soomaaliyeed oo cambaareeyey
generic sildenafil, generic clomid. waxaa magaalada Hargeysa lagu casuumay Odayaal Dhaqameedyo tiradooda ay gaareyso 60, oo ka soo jeeda Koonfurta Somalia, waxaana Casuumay Maamulka Somaliland si ay uga qeybgalaan Munaasabadaha 18-ka May oo uu sanadkaan samaysanayo Maamulka Somaliland.
Haddii aan nahay bahda Ururka Waddaniga Soomaaliyeed waxaan halkaan Cambaareyn uga soo jeedinaynaa Odayaasha dhaqanka Beelaha Koonfureed oo aqoonsaday Maalinta 18-ka May oo ah maalin uu u dabaaldegayo maamul gaar ah.
Haddii ay ka soo muuqdaan Xafladaha 18-ka May ee Hargeysa ka dhacaaya, ama ay hadalo ka jeediyaan, waxaa Odayaashaas loo aqoonsanayaa inay ku kaceen ficilo wax u dhimaaya Qaranimadii Somalia.
26-ka June iyo 1-da July waa maalmihii Xorriyadda Soomaaliyeed, waana maalmo Somaliweyn ay si gaar u qaddariso, laakiin 18-ka May waa maalintii la kala qeybiyey Shacabka Soomaaliyeed, waana maalin aysan aqoonsanayn shacabka Soomaaliyeed badankooda. Beelaha Somaliland qaarkood ayaaba ku kala qeybsan in Somalia ay kala go’do.
Ururada waddaniyiinta iyo dhamaan Shacabka Soomaaliyeed waa soo dhaweynayaan Booqashada ay odayaasha ku tageen Hargeysa, iyagoo u tagayo arrimo
dhaqan iyo Barnaamijyo dib loogu midoobaayo, laakiin waxaa tuhunka ku jiraa maxaa loogu soo beegay Munaasabadda 18-ka May ee Hargeysa looga dabaal degaayo.
SomaliLand waxay gaartay horumar xagga mamulka iyo nabadda, waxaa ka dhacay doorashooyin, waxaa ka sameysmay Xisbiyo mucaarada ah, Gole Barlamaan, Gole Wakiillo iyo Hay’ado Dastuuri ah, waxay sameysteen Calan u gooni ah iyo Map iyo Xuduudo, sida hoos ku xusan. Guulahaas oo dhan waxay ku qabsoomeen muddo ka badan 20 sanadood, Laankiinse, Maamulku wuxuu gaaray 60% xuduudaha SomaliLand, sida Map-ka hoose ka muuqato, waana Map-ka Beesha caalamka la horgeeyo oo loogu raadiyo aqoonsi Jamhuuriyadeed, oo ay ku sheegaan Gobollo iyo Degmooyin ay sheegtaan in dadkoodu ay matelaan, laakiinse aan maamulkoodu ka tirsaneyn, isla markaana aan lagana aqoonsaneyn gooni isu taagooda.
Sida Map-ka SomaliLand ka muuqata Goballada
Togdheer, Sool, Sanaag iyo Cayn ka soo billow degmooyinka: Duruksi, Balli-Dhiig, Buuhoodle, Caynabo, Laascaanood, Xuddun, Taleex, Gar-adag, Ceel-Afweyn, Hingalool, Ceerigaabo, Hadaaftimo, Badhan, Laasqoray, Boocame iyo Ceelaayo. Deegaanadaas oo dhan waa dhul aad u baaxad weyn, qiyaastiina ah 40% baaxadda Map-ka SomaliLand ka muuqata, hadana aan hoos imaan Maamulka Hargeysa, maxaa yeelay Sanaadiiq Doorasho iyo mid aftiba lama geyn aaggaas, ololo doorashooyina kama dhici, taageero dadweynana kama heystaan. Deegaanadaas, waxay heysteen maamulo iyaga u gaar ah.
Siyaasiinta SomaliLand waxay xoogga aad u saareen Afrika iyo Beesha Caalamka, oo ay ku daaleen muddo
20 sanadood ah, sidii ay aqoonsi uga heli lahaayeen, laakiinse waxay ka gaabiyeen, sidii ay taageero uga raadsan lahaayeen gudaha SomaliLand, khaasatan Xuduudaha uusan maamulkoodu gaarin.
waxaa muddo dheer ay beesha Caalamka kula talinaysay inay wadahadal iyo heshiisyo la gaaraan Soomaalida degaanka kala dhaxeeyo, aqoonsigana ay iyaga ka raadsadaan.
Dimoqraadiyaddu waxay shaqeyneysaa marka dhinac kasta laga fiiriyo, oo aan hal mowqif uun la isku soo koobin, deegaannada deriskana la tixgeliyo, taas waxaan ula jeednaa deegaanno SomaliLand ka tirsan ayaan laga ogoleyn nidaamka Hargeysa, markaa maahaa in fikirkooda la muquuniyo, muddo ka badan 20 sanadood ah ayey heysteen maamul iyaga u gaara ah oo ka madaxbannaan kan SomaliLand.
SomaliLand Maamulkooda iyo mowqifkooda, cidna kuma faragelin, cidina kuma heysato, waana ku guuleystyn iney maamul sameeystaan, laakiinse waxaa jira Khilaafyo xuduudaha qabaa’ilka ku dhisnaa oo soo jiitamaayey muddo Qarniyo ah, taasna waa iney tixgeliyaan, haddii ay xoog isticmaalaan waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa Maamulkii iyo nabadgalyaddii ay muddada dheer soo dhisanayeen.
Muwaadiniin badan oo SomaliLand u dhalatay ayaa Koonfurta Somalia deggan, wax dhibaato ahna kuma qabaan. Taariikhda sida laga warqabo ma jirto colaado dhexmartay, Qabaa’ilka Koonfurta, iyo Qabaa’ilka SomaliLand, laakiin Shacbiga SomaliLand waxaa dhibaato u geystay Maamul Keli Talis ah, ee ma jirto Qabaa’il isa soo abaabulay oo ku soo duulay.SomaliLand.
Khilaafka degsiimaha ah ee SomaliLand dhexdeeda ka jira ayey siyaasiinta SomaliLand u beddelaan khilaaf ah Koonfurta Somalia iyo SomaliLand.
Maamulka Somaliland waxay heshiiyo la gaareen Dowladda uu Hogaamiyo Mudane Xasan Shiikh, heshiisyadaas shacabka looma soo bandhigin, tuhumo badan ayaana laga qabaa, hadana waxaa bilowday heshiisyo qarsoon oo lala gelaayo Odayaasha dhaqanka, taasna waxay ku dhawdahay in Odayaasha Beelaha Koonfureed ay ku dhacaan Dabin, taasoo ay sababi karta in Somalia la kala qeybiyo.
Haddii aan nahay Bahda Ururka Waddaniga Soomaaliyeed waxaan Odayaasha Dhaqanka ugu baaqeynaa inay iska ilaaliyaan shirqool inay ku dhacaan, kana feejignaadaan Khiyaamooyinka Maamulka Somaliland. Haddii aad ka qeyb gashaan Munaasabada 18-ka May.
Waxaan halkaan mahadnaq gaar uga soo jeedinaynaa Odayaasha kasoo noqday Hargeysa, wejigana ka soo qarsaday Munaasabadaha 18-ka May, Odayaasha weli ku harsan Hargeysa, waxaan ka codsanaynaa inay Shacabka u caddeeyaan Mowqifkooda, Haddii kale waxaad ku dhex dhacaysaan dabin Khiyaamo Qaran, waxaadna wajahaysaan Kacdoon Shacab iyo Banaanbaxyo la idinkaga soo horjeedo.
Haydaha kala duwan ee Dowladda Fedaraalka, sida, Baarlamaanka, Golaha Wasiirada, Hayada Dastuuriga ah iyo Hayadaha Amaanka, waxaan ugu baaqeynaa inay Talaabo sharci ah ka qaadaan Odayaasha Dhaqanka ee beelaha Koonfureed haddii ay baal maraan Dastuurka dalka u degsan, kuna dhaqmaan ficillo wax u dhimaayo Qaranimada Somalia.
Dastuurka Somalia ayey ku caddahay in Qaranimada, Xuduudaha iyo Midnimada Somalia ay tahay lama taabtaan. Dastuurkana cid ka sarreyso ma jirto.
Haddii aan Bahda Ururka Waddaniga Soomaaliyeed waxaa baaq u direynaa Urur bulshada, Ururada Waddaniyiinta iyo Dhaamaan Shacabka Soomaaliyeed, inay abaabulaan Banaabaxyo iyo Kacdoon shacab oo loogu soo horjeedo in Somalia la kala qeyb qeybiyo, Qaranimadii Soomaaliyana Bohol laga tuuro.
Ururka Waddaniga Soomaaliyeed waxay halkaan Tacsi uga dirayaan Dhammaan dadka rayid ah oo ay haweenka ugu horeeyaan ee sida xaqdarrada ah loogu laynayo maalin walba gudaha Somalia. Waxayna ALLAH (SWT) ugu baryayaan intii Dhaawac ah inuu Caafimaad taam ah siiyo, dhibka soo gaareyna uu ugu beddelo wax ay ku farxaan.
Intii dhimatayna inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo. Ehelladoodana samir iyo Iimaan ka siiyo. “Aamiin”.
Waxaan Allah (SWT) ka beryeynaan inuu Ummadda Soomaaliyeed ka dul qaado dhibka ay maanta ku jiraan. “Aamiin”
Ururka Waddaniga Soomaaliyeed Netherlands
Abdullahi Jama Mohamed Ururka Waddaniga Soomaaliyeed